Gorodona fanatanjahantena PVC - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Gorodona fanatanjahantena PVC
Gorodona fanatanjahantena PVC
Ahitsio: Denny　2020-03-27　Mobile
1. Olana fampiononana:
Ny haavon'ny gorodona fanatanjahantena PVC matihanina dia azo ovaina rehefa misy fiantraikany, toy ny matotra misy tombo-kase miaraka amin'ny rivotra ao anaty.Rehefa mivadika na mikoropaka ianao dia mety hisy fiantraikany kobika izay omen'ny teknolojia fanakatonana mihidy. Loza ara-panatanjahantena.
2.Olana amin'ny horohorontany:
Tremor dia manondro ny faritra izay miovaova ny gorodona.Ny lehibe kokoa ny sakam-pivezivezena dia mety hiteraka vaky indray. Misy karazany roa mifanenjika: tora-pandrenesana sy horohoron-tany misy.
3.Olana amin'ny fihenan'ny vovoka:
Ny tsindrona napetraky ny olona mandritra ny fanazaran-tena dia miteraka vovoka eny amin'ny gorodon'ny fanatanjahantena PVC. Ny firafitry ny gorodona dia tsy maintsy manana ny fiasan'ny tsindrona manafintohina, izay midika fa ny gorodona dia tokony hanana fahaizana manapoaka angovo. Kely kokoa noho ny eo amin'ny tany sarotra ny hery miasa, toy ny amin'ny tany mivaingana. Izany hoe rehefa mitsambikina sy miankohoka amin'ny tany ny atleta, 53% amin'ny fiantraikany tokony ho tsindry amin'ny tany ny atleta, mba hiarovana ny kitrokelin'ny atleta, meniscus, tadidy ary atidoha, mba tsy haharatran'ny olona mandritra ny fanazaran-tena. ratra. Ny fiarovana azy dia mieritreritra ihany koa fa tsy misy fiantraikany amin'ny olona mifanakaiky azy ny olona iray rehefa manao fanatanjahantena amin'ny fanaovana fanatanjahantena PVC. Io no foto-kevitra momba ny fihanaky ny fantsom-pifandraisana, ny fanamafisam-peo fanamafisana sy ny fanitarana lavabe voalaza ao amin'ny fenitra DIN Alemanina.
4.Fanontaniana momba ny fifamaliana:
Ny fandalinana dia naneho fa 12% ny ratra nahazo ny mpilalao basikety dia niseho nandritra ny fihodinana iray. Ny fahaizan'ny soratry ny fanatanjahan-tena dia manondro na manana lavaka be loatra ny gorodona (izay mampihena ny haingam-pandehan'ny fihodinana) na koa mivadika (izay mampitombo ny risika). Raha jerena ny hetsiky ny atleta sy ny fiarovana, ny kojakoja friction no tokony ho sarobidy indrindra eo anelanelan'ny 0.4-0.7. Ny fahaizan'ny tsodrano fanatanjahantena PVC amin'ny ankapobeny dia voatazona eo anelanelan'ity kômity ity.Ny coefficient de friction matihanina PVC mpanao fanatanjahantena matihanina dia 0.57.Fanapo-pandrika ampy sy antonony hiantohana ny fahamarinan'ny hetsika ary mitazona izany amin'ny làlana rehetra. Ny tsy fitanisan-tsoa ary ny fanavaozana ny fanaovan-tsototra mba hahazoana antoka ny hetsika mora sy ny fihodinan'ny toerana tsy misy sakana.
5.Ny olana momba ny faharetan'ny baolina:
Ny fitsapana fanentanana ny baolina dia ny fanintsanana ny basikety amin'ny haavon-tongotra 6,6 tongotra mankany amin'ny gorodona fanatanjahantena hizaha ny haavon'ny fitomboan'ny basikety. Ny angon-drakitra izany dia aseho isan-jato, ary ny haavon'ny fihodinan'ny basikety eo amin'ny tany mivaingana dia ampiasaina ho toy ny fenitra fampitahana mba hampisehoana ny maha samy hafa ny haavon'ny haavon'ny rebound. Ny fitsipiky ny lalao baolina anatiny dia mitaky ny fampiasana ny tany amin'ny fifaninanana fanatanjahan-tena na fiofanana, toy ny fanaovana fanatanjahan-tena amin'ny baolina kitra sy ny ball hafa. Ny gorodona fanatanjahantena PVC dia manana fahatsapana mahatalanjona sy maharitra.Tsy misy maty marim-pototra eo amin'ny gorodona.Ny fahaizany fampitahana miverina dia mahatratra hatramin'ny 98%.
6.Fanontaniana momba ny fiverenan'ny herinaratra:
Io dia manondro ny angovo ara-panatanjahantena averina amin'ny herin'ny fanatanjahantena PVC rehefa manao fanatanjahan-tena ireo atleta hanatsarana ny fampisehoana fanatanjahantena.
7.Olana amin'ny fandefasana entana:
Ny enta-mavesatra sy ny fiorenan'ny gorodona fanatanjahantena matihanina dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra takian'ny fifaninanana sy ny fampiofanana. Ny famaritana ny fenitra sy foto-kevitra mikotrika.
Gorodona fanatanjahantena PVC Ny atiny mifandraika
Ny fahasamihafana eo amin'ny gorodona plastika sy ny rindrina hazo matevina
Ny toerana fanaovana fanatanjahantena dia misy ny kianja filalaovana basikety, fitsarana badminton, fitsarana volley, fitsarana tenisy latabatra, gym, sns, izay mifototra amin'ny kianja fanatanjahant...
Mpamatsy marika KINGUP
Ahoana ny fisafidianana LVT, SPC, WPC
Fanasokajiana ny gorodona